About Us - Qingdao New Asia Pacific Group Inkampani
Qingdao New Asia Pacific Group Inkampani
I-Qingdao New Asia Pacific Group Company yasungulwa ngonyaka we-2000 edolobheni elihle lase-Qingdao. Ukuhamba kwezwe nokuhamba olwandle kulula kakhulu.
Ifektri yethu inamandla obuchwepheshe nethimba lobuchwepheshe. Imikhiqizo yethu ithengiswa emazweni amaningi anjengeJapan, iMalaysia, USA kanye namazwe amaningi aseYurophu. Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle futhi yokuncintisana.
I-NAP ibambelela kumanani ezinkampani wekhasimende kuqala, ukusebenzisana, ubuqotho, intshiseko nokuzinikela. Amaqembu ethu okuthengisa anikezela ngomsebenzi omuhle kumakhasimende ethu.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ingumkhiqizo ovikelayo njengesihlangu sobuso, i-apron enokulahlwa, izembatho zokuzivikela, gown yodwa yokulahlwa ngaphandle, i-gown yokuhlinza, izinto zokuhlola okusheshayo (ikhasethi yokuhlola) njll. Isitifiketi se-CE noma i-FDA siyatholakala.
1. Lo mkhiqizo usebenzisa i-PET ephezulu esobala yokuhlukaniswa kobuso nokuvikeleka okuphelele.
2. Umkhiqizo ulula ngesisindo, uphakeme ngokusobala, ukhululekile ukugqoka.
3. Ukuvikelwa kokuphepha, ukusebenza kahle kakhulu ukuvimba amaconsi kanye namathe okuchachamba.
4. Vimbela ngokuphumelelayo umbono obumbene obangelwe umehluko wokushisa nomhwamuko wamanzi.
Isihlangu sobuso sisetshenziswa empilweni yansuku zonke nasekukhiqizeni kwansuku zonke. Ingasetshenziswa emhlanganweni wokusebenzela, ehhovisi lomsebenzi, ekhishini, emvuleni yemvula, ephathini enkulu, emhlanganweni njll.
Umphumela wokuvikelwa: anti-uthuli, anti-oyile ovela ekhishini, anti-splash, anti-inkungu, anti-droplet, izimpahla ezingezona ezokwelapha, hhayi ezempilo.
* anti-amanzi, anti-oyela, anti-uthuli, ukusetshenziswa okubanzi emikhakheni ehlukahlukene. Ukusetshenziswa okukodwa, isisindo esikhanyayo, i-Waterproof, Ibanga lokudla.
Ama-Aprons aphikisana notshwala, ugrisi namafutha.
Ukukhanya, okushibhile, ubufakazi bokuthi uthuli, ubufakazi bokubeka uwoyela, ukungcola.
* Kuyabiza kepha kuyabambeka, futhi kuyamelana ne-Acid ne-Alkali, okungasetshenziswa ekuhlolweni kwamakhemikhali, ukuvikelwa embonini nakwezolimo, ukudaya, ubuhlengikazi nokunye.
Indwangu: Polypropylene spunbonded PE film coated nonwovens
Inzuzo: I-antibacterial, i-Anti-static, i-Soft, I-Waterproof, i-Breathable
Yonke inqubo nezinto ezingavuthiwe zisezingeni eliphakeme kakhulu.
Inentsebenzo enhle yokulwa nokufakelwa, ukusebenza kahle kokuhlunga okukhulu, ukumelana nomswakama ongaphezulu, amandla nokuqina komoya, okukuvumela ukuvimba ngempumelelo uthuli lwamanzi nothuli.
Okungavunyelwa Ukuhlukaniswa Okungafanele
Umgqomo wokuhlukanisa onakalisayo uyisitha esingenantambo ukunikeza umgoqo olinganiselayo ezigulini' uketshezi lomzimba kanye nokuqunjelwa. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukwelashwa kweziguli nokuhlolwa kokuvimbela ubhubhane ezindaweni zomphakathi. Ingasetshenziswa futhi kwezolimo, kwezolimo, ekuvikelweni kwemvelo nakwamanye amasimu.
Imichilo yethu isikwa kabanzi esifubeni nemikhono ye-roomier. Indwangu ethambile futhi efakazelwe ngamanzi ifaka ubuchwepheshe obuphambili bezinto ezinikezela nge-barrie engahambi kahle. Kugcina ukhululekile ngenkathi usebenza, kukusiza ukuba uzizwe uzethemba futhi ukwazi ukulawula.
Ikhwalithi enhle nentengo yokuncintisana.
Amakhithi Okuhlola Ngokushesha / Ikhasethi Yokuhlola
Izifo zeCoronavirus 2019 (COVID-19) I-IgM / IgG Antibody Test iyashesha, ilungele futhi ilungele i-immunochromatographic in vitro ukuzindla kokutholwa okungafani kwe-IgM & IgG antibodies egciwane le-COVID-19 ku-serum yomuntu, iplasma noma amasampula egazi aphelele atholakala esigulini esinegciwane le-COVID-19. Idivaysi yakhelwe ukusiza ekuqedweni kokuchayeka kwamuva noma kwangaphambilini kwegciwane le-COVID-19 ukulandelela isimo sesifo ngemuva kokutheleleka ngegciwane le-COVID-19. Lokhu kuhlolwa okusheshayo kits kuthengisa kahle kakhulu.
Uma kukhona imibuzo sicela unganqikazi ukuxhumana nomuntu othengisayo. I-imeyili:Cynthia@napgroup.net Yamukela imibuzo yakho!
Izingubo Zokuvikela, Izambatho Zokwelapha Ezilahlayo, Amanzi-Proof Apron, Izigqoko Zokuzivikela, Dust-Proof Pet Face Shield, Amanzi-Proof Hdpe Apron,